Rosiana vola | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home Rosiana vola RSS
Ny roubles no vola ny Rosiana vola
Ny roubles no vola ny Rosiana vola. Izany ihany koa ny vola ampiasaina ho toy Ossetia Atsimo sy Abkhazia izay vondrom roa izay ampahany fantatra. Ny roubles tamin'ny taloha ny vola ampiasaina ho amin'ny Firaisana Sovietika sy ny Rosiana Fanjakana talohan'ny farany nisaraka. Belarosia ny tany ihany koa ny manana vola ny mitovy anarana. 100 kopeks manao 1 roubles. Ny Rosiana dia tsy manana vola misy marika izay ampiasaina amin'ny fomba ofisialy, anefa “py6” dia fanafohezana izay be mpampiasa. Sariohatra maro samihafa ireo dia heverina ho toy ny ankehitriny ny manapa-kevitra amin'ny marika ofisialy.
ny teny “roubles” dia avy amin'ny teny “rubit” izay midika “manapaka”. Fahiny, roubles Tsy tena ho minted vola; fa izany dia ohatry ny lanjany sy ny lanjany. Hafa noho ny kopeks, ny roubles Azo nizara an-altyn (3 kopecks), ny grivennik (10 kopecks), ny polupoltina (25 kopecks), ary ny poltina (50 kopecks). Tamin'ny taona 1704 fa ny governemanta Rosiana nanomboka namoaka volafotsy robla toy ny Rosiana vola. 1 roubles tamin'ny voalohany sarobidy amin'ny 28 GM ny volafotsy fa amin'ny 1760 no izy devalued ny 18 GM volafotsy. Teo anelanelan'ny taona 1756 ary 1779, vola madinika volamena no navoaka ary ny taona 1770 ary 1771, varahina no namoaka vola. Assignatsii, izay taratasy promissory-tsoratra no navoaka teo anelanelan'ny years1769 sy ny 1849.
Ny Rosiana dia nandalo vola lehibe amin'ny sarobidy fitotonganan'ny momba ny maro hafa vola. Raha ny tena izy, mankany amin'ny faran'ny volana Aogositra sy ny fiandohan'ny Septambra 2014, firaketana an-tsoratra dia nikasika iva.
Ny Rosiana mijaly avy amin'ny ara-toekarena ihany koa Ketraka Lava. Na izany aza, ny olona mba tena mahafantatra ny olana mifandray amin'ny devalued Rosiana vola. Ny roubles ny sarobidy no navela lavo ambany hanohitra fa ny dolara sy ny Euro. Izany dia navela satria ny Rosiana toe-karena dia mifatotra mafy ny menaka, ary satria ny raharaham-barotra ny diloilo ao amin'ny $49 ny barika izy ireo mandratra. Novakiko any ho any fa mila Rosia solika ho momba ny $70.00 isan-barika mba ho azy ireo mba mampifandanja ny teti-bola